Hain-trano-na Orinasa Nahafaty Olona Tao Bangladesh Mampiseho Ny Fampiasana Mpiasa Tsy Ara-drariny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2012 15:32 GMT
Nampametra-panontaniana marobe ny hain-trano mahatsiravina izay nahafatesana mpiasa maherin'ny 110 tao amin'ny orinasa fanenonan-damba ao Tazreen Fashions Ltd, tranobe rihana faha-sivy ao Nischintapur, Ashulia (akaikin'ny renivohitra Dhaka). Na dia manana fitaovana mpamono afo 335 sy mpiasa 300 nampiofanina momba ny famonoana afo raha sendra misy ny firehetana aza ilay orinasa, tsy nisy akory izay tena fahaizana tamin'ny famonoana ny afo. Naneno tamin'ny fotoana ara-dalàna ny fanairana momba ny fisian'ny afo saingy nanambara ireo nanatri-maso fa nohidian'ny lehibe avokoa ny varavarana sasany mba hanakanana ireo mpiasa tsy hitsoaka.
Manana orinasa fanenonan-damba maherin'ny 4000 i Bangladesh, izay ny telo am-pahaefatra mahery amin'ny vola miditra amin'ny fanondranan'entana no an'ny firenena. Mampiasa mpiasa maherin'ny 3 tapitrisa kosa ny indostria mpanondrana lamba fahatelo lehibe indrindra manerantany, vehivavy avokoa ny 90% amin'izany.
Roapolo taona mahery , nanampy tamin'ny fivoaran'ny asan'ny vehivavy mahantra tao Bangladesh ireo orinasa fanenonan-damba, izay ny asa an-trano no asa voalohany be mpanao sy ampanaovina azy ireo. Na dia ambany aza ny karama, Vikas Bajaj nanoratra tao amin'ny gazety New York Times momba ny vokatsoa hoentin'izany indostria izany amin'ireo fianakaviana sy ireo mpiasa vehivavy vaovao.
Satria niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao sosialy sy ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra ny sarin'ireo vata mangatsiaka kilan'ny afo, maro tamin'ireo olona no tohina sy nisafoaka. Mpiasa afaka haba tezitra mafy an-jatony no nanao fihetsiketsehana androany (Alatsinainy) mba hitaky ny fahamarinana sy ny fepetra tsara sy mendrika mifehy ny asa. Mpiserasera marobe kosa no naneho ny fahatezerany tao amin'ny Facebook, bilaogy sy fampahalalam-baovao hafa ary nametraka fanontaniana betsaka.
Rahnuma Ahmed nanoratra hoe:
Seeker nanoratra hoe:
Fijery hafa ihany koa no nilaza raha toa ka fanahy iniana natao ity loza momba ny firehetana ity. Mpiasa vehivavy no voasambotra androany teo akaikin'ilay orinasa fanenonan-damba izay nanao fanahy iniana niezaka nandoro ny orinasa. Niaiky tamin'ny polisy [bn] izy fa nokaramaina Taka 20,000 ($250) hanao izao heloka izao. Nanambara tamin'ny antenimiera ny praiminisitra fa efa nomaninana mialoha ny fandoroana ary misy ifandraisany akaiky tamin'ireo loza mahatsiravina marobe vao haingana niseho tao amin'ny firenena .
Saingy tsy niraharaha izany fijery sy fanazavana izany i Rahnuma Ahmed:
Ny olana, hoy ny lehiben'ny BGMEA, dia ny fahamehana, ny tahotra. Ny olana, hoy izy ireo, dia ny tsy fahaiza-mitantana (fitantanana tsy ampy). Ny olana, hoy izy, dia ny tampodi-fohy-rianaratra (court-circuit). [..]
Nanambara ny governemanta fa homena onitra ireo niharam-boina ary hanokana andro fisaonana ny firenena. Nampanantena ihany koa izy fa hanidy ireo orinasa tsy manana fitaovana famonoan'afo na fiarovana amin'ny afo. Na dia izany aza, nanameloka ny governemanta sy ireo antoko politika ao amin'ny firenena i Kuloda Roy [bn] noho ny tsy firaharahian'izy ireo ny olana amin'ny tokony hanatsarana ny fepetra mifehy ny asan'ny mpiasa. Nanome tsiny ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa izy:
Shahidul Alam nandika ity afisy eto ambony ity:
Hetsika antsoina hoe: Eo ivelan'ny Mozeam-pirenena tamin'ny 27 Novambra 2012 tamin'ny 3:00 ora hariva